राजकुन्द्राका बारेमा अदालतले दियो यस्तो निर्णय, अब के गर्लिन् शिल्पा ? – Jagaran Nepal
राजकुन्द्राका बारेमा अदालतले दियो यस्तो निर्णय, अब के गर्लिन् शिल्पा ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री शिल्पा सेट्टीका पतिलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । उनलाई ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश अदालतले दिएको हो । अ श्लि ल भिडियो निर्माण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका भारतीय व्यापारी राज कुन्द्रा धरौटीमा रिहा भएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । उनलाई मुम्बई अदालतले सोमबार साँझ धरौटीमा रिहा गरेको हो ।
कुन्द्रासँगै उनका सूचना प्रविधि (आइटी) प्रमुख रियान थोर्पेलाई पनि अदालतले रिहा गरेको छ । दुबैलाई ५० हजार धरौटीमा अदालतले रिहा गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । उनी सम्भवत अब मंगालवार घर फर्कने छन् । साँझ फैसला आएका कारण अन्य प्रकृया पुरा हुन नपाएकाले सोमवार नै घर फर्कन नपाएका हुन् ।
चर्चित बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति समेत रहेका कुन्द्रा र उनका आइटी प्रमुख थोर्पेलाई अ श्ली ल फिल्म बनाएको आरोपमा गत जुलाई १९ मा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।
शिल्पा शेट्टीले आफ्नो बयानमा यसो भनिन्
राज कुन्द्रा घटनामा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीको बयान पनि लिइएको थियो । शिल्पा शेट्टले आफ्ना पतिको कामको बारेमा बताएकी थिइन् । मिडिया कम्पनी को काम को बारे मा बताउँदै उनले यो कम्पनीले छोटो भिडियो बनाउने गरेको जानकारी दिएकी थिइन् । जसमा अभिनेत्री आफ्नो इच्छा अनुसार भिडियोमा सहभागी हुन्थे ।
शिल्पाले भनिन् ‘म मेरो काममा व्यस्त थिएँ र मैले मेरो श्रीमानलाई सोधिन कि उनी के गर्छन्। उसले मलाई उसको कामको बारेमा केहि बताएनन्। मलाई यस बारेमा केहि थाहा छैन।